लगानी Archives - Page3of 195 - Chanakya Post
६ हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट धमाधम सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । यसैैक्रममा, हालसम्म गत वर्षको नाफाबाट ६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । लाभांश घोषणा गर्नेहरुमा रुरु जलविद्युत्, ङादी ग्रुप पावर, सिनर्जी पावर, अपी पावर, अरुण काबेली र सानिमा माइ हाइड्रोपावर रहेका छन् । […]
सेयर कारोबारमा किन आयो ह्वात्तै गिरावट ?
काठमाडौं । सेयर कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । यससाता अघिल्ला दुई दिन ९ अर्ब बढीको कारोबार हुँदै आएकोमा आज घटेर ५ अर्बमा सीमित भएको छ ।दुई महिनापछि कारोबार रकम ५ अर्बमा सीमित भएको हो । पछिल्ला दिनहरुमा कारोबार रकममा दैनिक गिरावट आइरहेको छ । गतहप्ता औसतमा दैनिक १० अर्ब बढीको कारोबार हुँदै आएकोमा […]
काठमाडौं । साहस ऊर्जा लिमिटेडले असोज ६ गतेदेखि प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ७० लाख कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । निष्काशन हुने कुल सेयरमध्ये २ लाख १० हजार कित्ता (३ प्रतिशत) कर्मचारीहरुका लागि र ३ लाख ५० हजार कित्ता (५ प्रतिशत) […]
सेयर बजारमा झिनो अंकको वृद्धि, ३ कम्पनीको मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट
काठमाडौं । सेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ । आइतबार एकैदिन ७१ अंकले बढेको बजारमा आज न्यून अंकको वृद्धि आएको हो ।सूचक जस्तै आज कारोबार रकम पनि स्थिर जस्तै रहेको छ । यसदिन करिब सवा ९ अर्बको कारोबार भएको छ । सेयर बजार मापक सूचक नेप्से आज ०.२७ अंकले बढेर २९४७.७० विन्दुमा पुगेको छ […]
एचआइडीसीएलको साढे ३ करोड कित्ता सेयर लिलामीमा आउने
काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को साढे ३ करोड कित्ता सेयर लिलामीमा आउने भएको छ । कम्पनीले हकप्रदमा नबिकेको ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता सेयर अब लिलामीमाआउने भएको हो । कम्पनीले साउन ५ गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्म हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः१ अनुपातमा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ११ […]
काठमाडौं । सेयर बजारले उच्च अंकले बाउन्स ब्याक गरेको छ । गत हप्ता तीव्र उतरचढाव आएको बजार आज ७१ अंकले कमब्याक गरेको हो । हाइड्रोपावर, फाइनान्स, विकास बैंक समूहको सेयरमा चमक आउँदा नेप्सेमा उछाल आएको हो । यी समूहका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च अंकले बढेको छ । सूचकमा उछाल आए पनि कारोबार […]
युनिलिभरलाई उछिन्दै राष्ट्रिय बीमा बन्यो सबैभन्दा महँगो सेयर मूल्य हुने कम्पनी, प्रतिकित्ता कति छ भाउ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाली सेयर बजारमा सबैभन्दा महँगो सेयर मूल्य हुने कम्पनी बनेको छ । वहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरलाई उछिन्दै राष्ट्रिय बीमा सबैभन्दा धेरै सेयर मूल्य हुने कम्पनी बनेको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य आज ठ्याक्कै १० प्रतिशत (प्रतिकित्ता १८३०रुपैयाँ)ले बढेर २० हजार १३२ रुपैयाँ पुगेको छ । विगत १ दशकभन्दा बढी […]
नेपाल ल्युब आयलको लाभांश घोषणा, कहिलेसम्म सेयर किन्नेले पाउँछन् ?
काठमाडौं । नेपाल ल्युब आयलले सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले वितरण योग्य नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी ३५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न असोज १८ गते सोमबार २९ औं वार्षिक साधरण सभा बोलाएको छ । सभा […]